Wax ka ogow farqiga u dhaxeeya Midowga Yurub iyo Jaamacada Carabta - Caasimada Online
Home Dunida Wax ka ogow farqiga u dhaxeeya Midowga Yurub iyo Jaamacada Carabta
Wax ka ogow farqiga u dhaxeeya Midowga Yurub iyo Jaamacada Carabta
Waa markale iyo warbixinteenii maalinlaha ahayd kana hadli doonta isbar bardhiga dhinacyo badan ku saabsan sida dhaqaalaha, siyaasada, qaxootiga, tirada dadka, tirada wadamada, luuqadaha, quwada milateri iyo qaar kale badan.
Waxaana diirada saari doonaa farqiga u dhaxeeyo Midowga Yurub iyo Jaamacada Carabta.
 Waxa la aasaasey 22 march 1945
 Jaamacada carabta waxa ku mideysan 22 dawladood.
 Waxa ah luuqada kaliya ee rasmiga ah waa 1 luuqad oo kaliya.
 Waxa laga aaminsan yahay 3 diimood oo kaliya.
 Xagga map-ka ama qariirada dalalka jaamacada carabtu waxay leeyihiin xuduudo isku
xidhan kaliya marka laga saaro dawlada yare e eratariya oo kaliya waaney xidhiidhsan yihiin.
Guul darooyinka jaamacada carabta
 Ururka jaamacada carabtu malaha lacag mideysan
 Jaamacadda carabtu malaha passport la’aan iney isku gudbaan, waxaana la masaafuriyaa qofka ay ka dhacdo ciqaamaddu.
 Dalalkan jaamacada carabtu malaha iskaashi difaac oo hirgalay oo iyagaaba colaad gaamurtey dhex hoganeysaa.
 Carabtu malaha qorshe cashuureed oo mideysan.
Tolow jaamacada carabta ma awood la’aan iyo dhaqaale xumo ayaa heysata?
Dhaqaalaha iyo milateriga jaamacada carabta:
 Dalalka jaamacada carabta dhul ahaan waxey ku fadhiyaan 13.3 milyan km square taasi waxay ka dhigeysaa wadanka 2aad ee aduunka ugu dhulka weyn.
 Midnimadda carabtu oo dhab ah waxa ay noqon lahayeen dalka 3aad ee ugu dadka badan aduunka waxa ka horeeya China iyo India oo kaliya.
 Tirade dadka 386 milyan.
 Haddii ay hal wadan ahaan lahaayeen waxsoosaarkooda gudaha wuxuu ahaan lahaa 2.75 tiriliyan taasoo ka dhigeysa kaalinta 4aad ee dhaqaalaha aduunka.
 Iyada oo ah dawlada 4aad ee daymaha ugu badan lagu leeyahay.
 Waxay maalin kasta soo saaraan 25 milyan barmiil oo shidaal ah, kaasoo noqonaya 3-dalool, dalool shidaalka aduunka laga soo saaro.
 Shidaalka kaydka ku ah dalaka carabta waa 722 bilyan oo foosto halka isugeynta gaaska dabiiciga ah ee ay soo saaraan waa 523 bilyan mitir kuyuub sanad walba taasoo u dhiganta 12% waxsoosaarka caalamka ee gaasta.
 Dhanka ciidamada waxa ay noqon lahaayen wadanka 1aad ee ugu askarta badan lehna 2.5 milyan oo shaqada ku jira iyo 3.3 milyan askarta keydka ah.
 Jaamacada carabtu waxey leeyihiin 18 kun oo taangi waana dalka 1aad eel eh tiro intan leeg.
 Waxa ay leeyihiin 5000 diyaaradood taa soo ka dhigeysa wadanka 2aad ee caalamka leh diyaarado intan leeg.
 Xagga maraakiibta waxa ay leeyihiin 1100 markab waxaana ay yihiin wadanka 1aad eel eh raxantan maraakiibta ah.
 Waxa la aasaasey 1992 kii isagoo markii hore uu rirey suuqii dhaqaalaha xorta ahaa.
 Waxa ku mideysan 23 dawladood.
 Luuqadaha waxa ka shaqeeya 23 luuqadood oo rasmi ah.
 Midowga Yurub waxa laga aaminsan yahay diimo iyo mabaadii fara badan.
 Xagga map-ka ama qariirada dalalka Yurub waa kuwo kala fog oon isku xidhiidhsaneyn masaafo bandanna u dhaxeysa.
Guulaha ay gaadheen Midowga Yurub:
 Midowga Yurub waxa uu leeyahay lacag mideysan.
 Waxa ay ku guuleysteen in dadkoodu passport la’aan isku gudbaan xuduuduhuna wuu siku furan yahay.
 Dalalka Yurub waxa ay sameysteen iskaashi difaac oo hirgalay.
 Dalalka yurub waxa ay midowgooda ku sameysteen hanaan cashuureed oo mideysan.
Su’aal: akhriste maxaa sababey in jaamacadda carabtu sidan u guuldareystaan?